Oovimba be-SOL-Funda ukurhweba
I-Solana yenqaba kwiNgingqi ethengiswa kakhulu, ayikwazi ukugcinwa ngaphezulu kweedola ezingama-200
Ukuhlaziywa: 11 January 2022
I-Solana idibanisa ngaphezu kwe-130 yeedola
I-SOL/USD ifikelela kwindawo ethengiswe kakhulu
I-Solana (SOL) Iinkcukacha-manani zangoku
Ixabiso langoku: $ 135.80
Intengo yeNtengiso: $ 69,185,352,074
Umthamo wokuThengisa: $ 2,037,799,674
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 280, $ 300, $ 320
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 160, $ 140, $ 120
Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso ngoJanuwari 10, 2022
EkaSolana (SOL) Ixabiso liqhubekile nokuhla kwalo kodwa alikwazi kugcina ngaphezulu kweedola ezingama-200. Abathengi bayasilela ukugcina ixabiso lingaphezulu kwe-200 yeedola eziphezulu. NgoDisemba i-27 uptrend, iinkunzi zenkomo zaphuka ngaphezu kwee-avareji ezihambayo kodwa zahluleka ukugcina ixabiso elingaphezu kwe-$ 200 ephezulu. Ngenxa yoko, i-SOL / i-USD yachithwa njengoko i-altcoin yehla ukuya kwi-133 yeedola. Kwixabiso langaphambili lehla kwi-148 yeedola ephantsi, i-altcoin yachithwa kwi-240 yeedola. Namhlanje, i-cryptocurrency ifikelele ezantsi kwe-133 yeedola kwaye ukunyuka okungaphezulu akunakwenzeka.
I-SOL/USD – Itshathi yemihla ngemihla
Solana (SOL) Izalathisi zobuGcisa zokuFunda
I-Solana ngoku ikwinqanaba le-30 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-SOL / i-USD ifikelele kummandla ogqithisiweyo wemarike. Uxinzelelo lokuthengisa lunokwehla okanye luphele. Abathengi kulindeleke ukuba bavele banyuse amaxabiso phezulu. Imivalo yexabiso ye-crypto ingaphantsi kwe-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50-day SMA ebonisa ukunyuka okungaphezulu.
USolana uhlanganisa ngaphezulu kwe-130 yenkxaso yeedola kodwa akakwazi ukugcina ngaphezulu kweedola ezingama-200. I-cryptocurrency ifikelele ekudinweni kwe-bearish. Okwangoku, ngoDisemba 13 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 81.34.
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, SOL, I-SOL/USD, Solana
USolana uhlaselwa kuHlaselo lweSibini kwiVeki enye phakathi kweNtlekele
Ukuhlaziywa: 7 January 2022
I-Solana (SOL) iqale kakubi ku-2022 njengoko inethiwekhi ifumene isiganeko sayo sesibini kwiveki yokuqala kaJanuwari iyodwa, ibeka isiganeko sayo sothungelwano kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
Iqela leSolana libhengeze ukuba isiganeko samva nje seza ngenxa yokunyuka kweentengiselwano eziphezulu zekhompyutheni. Ngenxa yesi siganeko, umthamo womnatha wehla ngamawaka ambalwa e-TPS ukusuka kwibango lokuqala le-50,000 yentengiselwano ngesekhondi (TPS).
Iqela lichaze ukuba esi yayisisizathu sokungaphumeleli kwentengiselwano ezininzi ezifunyenwe ngabasebenzisi abaninzi mva nje, longeza ukuba iqela labaphuhlisi sele lisebenza ukulungisa le miba.
Lo mbandela uza ngaphantsi kweentsuku xa inethiwekhi ye-SOL yahlaselwa yi-DDoS, apho abasebenzisi bafumana ixesha elifanayo lokunciphisa. Ngelixa ithiyori eqhelekileyo yohlaselo lwangoLwesibini kukuba yayiluhlaselo olusasazwayo lokukhanyela inkonzo (DDoS), umseki onguSolona uAnatoly Yakovenko waxoxa kuTwitter ukuba yayiluhlaselo nje. "Iintlungu zokufumana ixesha elitsha lokuthengisa."
Ukusabela kolu phuhliso lwakutsha nje, iGosa eliyiNtloko loTyalo-mali kwiCyber ​​Capital, uJustin Bons, kutshanje uvakalise ukuphoxeka kwakhe noSolana kwaye waya kuTwitter ukuqaqambisa izizathu zokuba kutheni engayixhasi le projekthi. Bons babanga ukuba iSOL "ebonisa indlela yokuziphatha kakubi" kwaye "Ukubeka phambili ukutsala abatyali-mali abangazi nto kuyilo oluhle lwe-blockchain." Wongezelela ukuba ukuhlaselwa kweDDoS kudibaniswa nokuhlaselwa kwe-51%. "Okwexeshana ukufumana ulawulo olulinganayo kwinethiwekhi ngokuhlasela abanye abachaphazelekayo."
Noko ke, uYakovenko wawakhaba ngawo omane la mabango, esithi “bubuvuvu obuqobayo.”
Amanqanaba angundoqo eSolana anokubukelwa — nge-7 kaJanuwari
Ngaphandle kokuhlaselwa kabini kwinethiwekhi yayo kule veki, inika iziseko eziguquguqukayo, uSolana uye waba mbi ngakumbi kwicala lobugcisa njengoko echithe ngaphezulu kwe-20% yexabiso layo kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo. Kunye noninzi lwemarike, i-SOL irekhode ukuthengisa okuthe kratya kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, eyithumele ukusuka kwindawo etofotofo ejikeleze ingingqi yeedola ezili-170 ukuya kwi-134 yeedola eyothusayo ngaphambili namhlanje.
I-SOLUSD - Itshathi yeeyure ze-4 kwi-FTX. Umthombo: TradingView
Oko kwathiwa, i-cryptocurrency ngoku ibambelele kwi-$ 140 uphawu lokuxhasa, njengoko iibhere zingabonakali uphawu lokucotha. Ngaloo nto, sinokubona ugqatso lwe-cryptocurrency lwesihlanu ngobukhulu ukuya kwi-130 yeedola ephantsi kwiintsuku ezizayo njengoko abathengi abaninzi bebhangisa kwaye bafuna indawo yokusabela kwi-stablecoins.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 140, i-$ 150, kunye ne-$ 160, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 130, i-$ 124 kunye ne-$ 120.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.99 zezigidi
Imali eyinkunzi yentengiso yase Solana: $ 43.5 billion
Solana ubukhosi: 2.16%
Inqanaba lentengiso: #5
tags Cryptocurrency, iindaba, SOL, Solana, Uhlalutyo lobuchwephesha
I-SOL / i-USD Faces Rejection kwi-$ 200, ngoMeyi uphinde ubuyele kwi-$ 148 okanye i-$ 140 ephantsi
Ukuhlaziywa: 4 January 2022
USolana ukwisilungiso esisezantsi
I-SOL/USD inokuhla iye phantsi kwe-114 yeedola
Ixabiso langoku: $ 167.92
Intengo yeNtengiso: $ 85,910,168,572
Umthamo wokuThengisa: $ 1,457,270,959
Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso ngoJanuwari 4, 2022
Ixabiso lika-Solana (SOL) likulungiso olusezantsi kwaye linokuphinda libuyele kwi-$ 148 okanye i-$ 140 ephantsi. Nge-26 kaDisemba uptrend, abathengi bazame ukwaphula i-200 yeedola kodwa bagxothwa. USolana wawa waza waqhekeka ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Kukho ukuthambekela kwexabiso lokubuyela kwixabiso eliphantsi kwi-148 yeedola. Nangona kunjalo, ukuba i-Solana ilahlekelwa yinkxaso ye-$ 148, imarike iya kuphinda iyancipha ukuya kwi-$ 140 okanye i-$ 115 amanqanaba exabiso.
Ukuhla kutshanje kwe-Solana kuye kwatyhala i-altcoin ukuya kwinqanaba eliphantsi le-41 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-SOL / i-USD ikwindawo ye-downtrend kwaye iyakwazi ukuqhubela phambili ukuhla. I-Solana ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-cryptocurrency iwele kwindawo ethengisiweyo yentengiso. Abathengi kulindeleke ukuba bavele banyuse amaxabiso phezulu. Kwangaxeshanye, uxinzelelo lokuthengisa lunokwehla.
I-Solana ikwintshukumo ephantsi kwaye inokuphinda ibuyele kwi-$ 148 okanye i-$ 140 ephantsi. Uxinzelelo lokuthengisa olongezelelweyo luyathandabuzeka njengoko ixabiso liwela kummandla othengiswe kakhulu kwimarike. Okwangoku, ngoNovemba 18 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-2.0 yezandiso zeFibonacci okanye i-$ 114.64.
I-Solana (SOL) iRali ukuya kwi-205 yeedola eziphezulu njenge-Altcoin Hovers Ngaphezulu kwe-180 yenkxaso ye-$
Ukuhlaziywa: 28 Disemba 2021
Umbutho weSolana ukuya kwi-205 yeedola
I-SOL/i-USD inokunyanzeliswa kwintshukumo yoluhlu
Ixabiso langoku: $ 192.17
Intengo yeNtengiso: $ 98,318,002,054
Umthamo wokuThengisa: $ 2,258,202,415
Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso ngoDisemba 27, 2021
EkaSolana (SOL) ixabiso liye lachacha ukusuka kwintshukumo yayo ezantsi njengoko i-altcoin ijikeleza ngaphezulu kwe-180 yeedola Inkxaso. Ixabiso le-crypto liqhekeza ngaphezu kwe-avareji yeentsuku ze-21 kodwa iyasilela ukuphuka ngaphezu kwe-50-day line ezihambayo. Ukuba iinkunzi zenkomo ziye zaphuka ngaphezu kwee-avareji ezihambayo, i-cryptocurrency iya kuphuma kwisilungiso esisezantsi. Ukunyuka kwangoku kuya kukhawuleziswa ukuya phezulu. I-altcoin iya kuphinda ibuyele kwi-highs yangaphambili ye-$ 240 kunye ne-$ 260. Nangona kunjalo, namhlanje uSolana ujongene nokukhatywa kumgca we-50 weentsuku ezihambayo. Eyona nto ibalulekileyo kukuba i-cryptocurrency iya kunyanzeliswa ukuba iguquguquke phakathi komgca weentsuku ezingama-21 kunye nomgca weentsuku ezingama-50 ezihambayo.
Ixabiso likaSolana likwinqanaba le-51 le-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba kukho ukulingana phakathi kokubonelela kunye nemfuno. I-altcoin inokuthi iphinde iphinde iqalise ukuhamba ngokulandelelana njengoko iguquguquka phakathi kwee-avareji ezihambayo. I-Solana ingaphezulu kwe-25% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu.
I-SOL / i-USD iphinde yaqala ukunyuka phezulu njenge-altcoin hovers ngaphezu kwe-$ 180 Inkxaso. Iinkunzi zithenge iidiphu ngaphezulu kwenkxaso ye-$152. I-uptrend yangoku ifikelele phezulu kwi-205 yeedola. Ngoku ibuyela kwicala elisezantsi. Ukuba ixabiso lifumana inkxaso ngaphezu kwe-21-day SMA, imarike iya kuphinda iqalise phezulu.
I-SOL/USD – Itshathi yeyure ezi-4
USolana (SOL) Ujongene nokuKwaliwa kwi-189 yeedola eziPhakamileyo, ngoMeyi wehle ukuya kwi-115 yeedola.
Ukuhlaziywa: 21 Disemba 2021
USolana unokuphinda anciphe
I-SOL/USD iguquguquka ngaphantsi kwe-189 yeedola
Ixabiso langoku: $ 178.78
Intengo yeNtengiso: $ 91,465,347,481
Umthamo wokuThengisa: $ 91,465,347,481
Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso ngoDisemba 20, 2021
EkaSolana (SOL) ixabiso likwi-downtrend njengoko yehla ukuya kwi-148.48 yeedola kwaye inokuthi iyancipha ngakumbi kwi-$ 115. Ixabiso likaSolana lilungiswe linyuka kodwa lachaswa kumyinge weentsuku ezingama-21. Oku kubonisa ukuba imakethi isenokwehla ngakumbi. I-altcoin iya kuqala ukuhlaziya i-low yangaphambili kwi-148 yeedola. Ukuba abathengisi baphula i-low yangaphambili kwi-148 yeedola, uxinzelelo lokuthengisa luya kufikelela kwi-$ 140 okanye i-$ 115 ephantsi.
Ixabiso likaSolana lilungiswe phezulu njengoko lifikelele kwinqanaba le-44 ye-Relative Strength index period 14. Ibonisa ukuba i-altcoin isekho kwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. I-Solana ingaphezu kwe-40% ye-stochastic yemihla ngemihla. I-stochastic yemihla ngemihla ibonise ukuba imarike ikwimo ye-bullish. Isantya se-bullish asizinzanga njengoko ixabiso liguquguquka.
USolana ujongene nokukhatywa kumyinge weentsuku ezingama-21 kwaye unokuhla ngakumbi ukuya kwi-115 yeedola. Ngakolunye uhlangothi, ukuba abathengi baphule ngaphezu kwee-avareji ezihambayo okanye i-220 yeedola, ukunyuka kuya kuphinda kuqalise. Okwangoku, ngoNovemba 18 downtrend; umzimba ikhandlela retraceed ivavanywe 50 % inqanaba Fibonacci retracement. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-2.0 yezandiso zeFibonacci okanye i-$ 115. 74.
I-Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso: I-SOL / i-USD iyaqhubeka i-Bearish Run, i-breakdown ukuya kwi-$ 137 ephantsi.
Ukuhlaziywa: 13 Disemba 2021
USolana uyaqhubeka nokubaleka
I-SOL / USD ijolise kwi-137 ephantsi yeedola
Ixabiso langoku: $ 152.81
Intengo yeNtengiso: $ 78,086,746,143
Umthamo wokuThengisa: $ 2,331,403,035
Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso ngoDisemba 13, 2021
EkaSolana (SOL) ixabiso liye laqhubeka intshukumo yayo ezantsi emva kokugatywa ukusuka $240 ukumelana. Uxinzelelo lokuthengisa luye lwakhawuleziswa njengoko ixabiso lekhefu lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo.
Okwangoku, ngoNovemba 18 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-2.0 yezandiso zeFibonacci okanye i-$ 113.38. Ukususela kwisenzo sexabiso, i-altcoin iye yawa phantsi kwe-$ 152.77 ngexesha lokubhala.
I-Solana isekho kwinqanaba le-31 lexesha le-Relative Strength index 14. Ibonisa ukuba i-cryptocurrency isondela kummandla ogqithisiweyo wemarike. Uxinzelelo lokuthengisa lunokwehla. I-Solana ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Istochastic yemihla ngemihla ibonise ukuba imakethi ifikelele kwindawo ethengisiweyo. Abathengi banokuvela kwindawo ethengisiweyo yentengiso.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, uSolana usehla. Ixabiso lawela ngaphezulu kwe-178 yenkxaso, yaphinda yaphinda kathathu ngaphambi kokuba iphule ngaphantsi kwayo. Okwangoku, ngoDisemba 6 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 137.41.
USolana ufaka iBango eliKhokela kwiBlockchain Position kule Nyanga, Ngaphandle kohlaselo lwakutsha nje lweDDoS
ISolana (SOL) urekhode amanani achukumisayo kwikhonkco ngaphandle kokuba efumene uhlaselo lwamva nje lwe-denial-of-service (DDoS).
I-platform ye-on-chain analytics i-Santiment ibonise ukuba i-Solana iphumelele i-GitHub yemihla ngemihla yokungeniswa kwamazinga e-Polkadot (DOT) kunye ne-Cardano (ADA) ukuba ibe yi-blockchain yokuqala kwinyanga edlulileyo. Ingxelo ibonise ukuba i-SOL irekhode ukungeniswa kwe-GitHub yemihla ngemihla ye-90 phakathi kukaNovemba 12 noDisemba 13. Ngelo xesha, i-Polkadot irekhode ukuhanjiswa kwemihla ngemihla ye-76, ngelixa i-Cardano irekhoda i-65.
Okubangel 'umdla kukuba, oku kunyuka kuza kungekudala emva kokuhlaselwa kwe-DDoS kwinethiwekhi ngoDisemba 9, okwabangela ukungasebenzi kakuhle kwe-SOL. Nangona kunjalo, inethiwekhi ikwazile ukwenza amandla ngomba ngaphandle kokuvala ngokupheleleyo. Oko kwathiwa, uhlaselo luphakamise inkxalabo enkulu malunga nokuthembeka kwenethiwekhi kubaphuhlisi abaninzi kunye nabasebenzisi.
Uhlaselo lwe-DDoS lubandakanya ukusebenzisa umsebenzi ojoliswe kwi-botnet olungelelanisiweyo ojolise ekugqithiseni inethiwekhi ehluphekileyo kunye ne-traffic ekhohlisayo, ebangela ukuba kubekho ukusilela okukhulu kwi-blockchain.
Ngeli xesha, ezinye iingcali ziye zatyhola uhlaselo lwakutsha nje kwiziphene ezisisiseko kuthungelwano kunye nendlela yokuqinisekisa iProof-of-History (PoH). Ethetha nge-algorithm kaSolana ye-PoH, ingxelo yeGreyscale yaphawula ukuba:
"Indlela yokuvumelana yeSolana isebenzisa itekhnoloji entsha ye-blockchain engasetyenziswanga ngokubanzi kwaye enokuthi ingasebenzi njengoko bekucetywayo. Kusenokubakho iziphene kwi-cryptography ephantsi kwenethiwekhi, kubandakanya neziphene ezichaphazela ukusebenza kweSolana Network okanye ukwenza inethiwekhi ibe sesichengeni sokuhlaselwa. "
Amanqanaba angundoqo eSolana azakujongwa- nge-13 kaDisemba
I-SOL ihlala iphantsi koxinzelelo olunzima lwe-bearish njengoko iibhere ziququzelela ukutyhala okuzinzileyo ngaphantsi kwenkxaso ebalulekileyo ye-170 yeedola. Oku kuwa kuza emva kokuzama ukungaphumeleli ukuphinda kuvele ngaphezulu kwe-bearish tripwire yeeveki ezi-5 izolo, eyathumela i-cryptocurrency yesihlanu ngobukhulu ngaphantsi kwe-160 yeedola.
Oko kuthethiweyo, uSolana ngoku uthengisa kwelona nqanaba lisezantsi ukusukela nge-20 ka-Okthobha, ngaphambi nje kokubaleka i-parabolic eyityhalele kwelona xesha liphezulu.
Ndilindele ukubona ukuphindaphinda kwinqanaba le-170 yeedola kwiiyure ezizayo, kulandelwa kukuqhubela phambili kwe-bearish kufutshane ne-150 yeedola. Nangona kunjalo, ukophula ngaphezulu kwe-triwire nge-170 yeedola ukusuka kwi-rebound kufuneka kugcine iibhere kude kwakamsinya ngelixa iinkunzi ziphinde zabekwa.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 170, i-$ 180, kunye ne-$ 190, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 150, i-$ 140 kunye ne-$ 130.
Imali eyinkunzi yentengiso yase Solana: $ 48.5 billion
Solana ubukhosi: 2.25%
tags Cryptocurrency, iindaba, SOL, Solana, Uhlalutyo lobuGcisa
I-Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso: I-SOL / i-USD Ibambe ngaphezu kwe-$ 180 njengoko i-Altcoin iqala kwakhona i-Uptrend
Solana overs ngaphezu $180
I-SOL / i-USD iphinda iqalise ukunyuka
Ixabiso langoku: $ 195.71
Intengo yeNtengiso: $ 99,929,822,277
Umthamo wokuThengisa: $ 3,617,837,210
Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso ngoDisemba 6, 2021
EkaSolana (SOL) ixabiso kusekho kwindawo bearish trend. I-cryptocurrency yawa phantsi kwe-176 yeedola kodwa yahlehla. Umsila wekhandlela ukhomba kwaye uphinda ubuyekeze ubuphantsi obudlulileyo kwi-180 yeedola. Umsila wekhandlela omude ubonisa ukuba inkxaso yangoku iluxinzelelo olunamandla lokuthenga. Inkxaso yangoku ibambe ukususela ngo-Oktobha 27. Imarike iya kuphinda iqhube ukunyuka ukuba inkxaso yangoku ibambe.
I-Solana isekho kwinqanaba le-41 le-Relative Strength index ixesha 14. Ibonisa ukuba i-cryptocurrency ikwindawo ye-downtrend kwaye iyakwazi ukuhla ngakumbi. I-altcoin ine-bearish crossover. Oko kukuthi, umgca we-avareji yeentsuku ezingama-21 uwela ngaphantsi komgca ohambayo weentsuku ezingama-50.
Kwitshathi yeyure ye-4, i-downtrend iyancipha njengoko imarike idibanisa ngaphezu kwenkxaso ye-$ 180. I-altcoin iyaguquguquka phakathi kwe-$ 176 kunye ne-$ 200 amanqanaba exabiso. Okwangoku, ngoDisemba 4 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 171.79. Ukususela kwisenzo sexabiso, i-altcoin ibuyele kwindawo edibeneyo yoluhlu.
I-Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso: I-SOL / i-USD Ibuyisela Ngaphezulu kwe-$ 188 yenkxaso, iphinda iqalise i-Uptrend
Ukuhlaziywa: 29 Novemba 2021
USolana uwele phantsi kwe-188 yeedola
Ixabiso langoku: $ 206.85
Intengo yeNtengiso: $ 105,995,441,382
Umthamo wokuThengisa: $ 2,377,226,028
Solana (SOL) Uhlalutyo lweXabiso ngoNovemba 29, 2021
Ixabiso likaSolana (SOL) liphule ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo njengoko i-altcoin ifikelele kwi-182 yeedola. Namhlanje, i-altcoin ibuyisela ukusuka kwi-26 kaNovemba downtrend. USolana uqhawuke ngaphaya komyinge weentsuku ezingama-50. Nangona kunjalo, ukuba ixabiso liphule ngaphezu kwe-21-day line ehambayo ehambayo kwaye i-bullish i-build igcinwe, iya kubonisa ukuqaliswa kwakhona kwe-uptrend. Okwangoku, ixabiso le-crypto lingaphezulu komgca weentsuku ze-50 kodwa ngaphantsi komgca weentsuku ze-21 ezihambayo.
I-Solana isekwinqanaba le-49 le-Relative Strength index period 14. Ibonisa ukuba kukho ukulingana phakathi kokubonelela kunye nemfuno. Umgca weentsuku ze-50 kunye nomgca weentsuku ezingama-21 ezihambayo zinyuka zinyuka zibonisa ukunyuka. I-Solana ingaphezulu kwe-40% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu njengoko inyuka.
Kwitshathi yeyure ezi-4, i-downtrend ibonakala ifikelele ekudinweni kwe-bearish njengoko i-cryptocurrency ibuyela ngaphezu kwenkxaso yangoku. Umsila omde wamakhandlela ubonisa ukuba inkxaso ye-188 yeedola inamandla okuthenga uxinzelelo. Okwangoku, ngoNovemba 10 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 194.25. Ukususela kwisenzo sexabiso, i-altcoin iguqule ngaphezu kwenkxaso ye-188 yeedola.
USolana unokugqitha kwi-Ethereum nge-ETH 2.0 Flaw: FTX Co-founder
Ukuhlaziywa: 26 Novemba 2021
USam Bankman-Fried, umseki wenye yezona zinto zinkulu zokutshintshiselana nge-cryptocurrency-FTX-uqaphele ukuba ISolana (SOL) inokugqitha i-Ethereum kungekudala. UBankman-Fried wenze oku ekuveleni kwakhe eKitco.
I-FTX-co-founder, i-crypto-billionaire ecebileyo, icacise ukuba u-Ether unokurekhoda ukwamkelwa okukhulu kwindawo yeziko nangona i-blockchain yayo ihluleka ukusilela kuloo nto.
I-Bankman-Fried iphinde yagxininisa imiba yokudibanisa ejikeleze i-ETH 2.0. Uthethe ukuba ngelixa uhlaziyo luyakonyusa umthamo wenethiwekhi ye-throughput ngokwabelana, imisebenzi ehambelanayo inokuba ngumsebenzi wokufezekiswa.
Oko kwathiwa, ngengxaki enokwenzeka yokudibanisa, izicelo ze-DeFi ziya kufudukela kwinethiwekhi ene-shard efanayo ukuze kugcinwe umyalelo wokusebenza. Ngokutsho kweBankman-Fried, oku kunokuba yilapho uSolana edlula i-Ethereum.
U-Solana urekhode ukusebenza okungcono kakhulu kulo nyaka kune-Ethereum, ebeka indlela yakhe yokuba yi-cryptocurrency yesihlanu ngobukhulu nge-market cap.
Ngeli xesha, umseki we-FTX uye wabuzwa kwiikhrayitheriya ezithile abantu ekufuneka bezijongile xa bekhetha iiprojekthi ze-crypto oza kutyala kuzo, apho waphendula ukuba abatyali-mali kufuneka babeke iliso kwimijikelezo ye-meme.
Nangona kunjalo, i-crypto-billionaire yalumkisa abaphulaphuli malunga nesidingo sokuqonda umngcipheko we-meme stocks kunye nee-meme zemali ezizisa.
Kulo nyaka, imakethi ye-crypto irekhode ukunyuka kwe-meteoric kwiingqekembe ze-meme ezifana ne-Dogecoin kunye ne-Shiba Inu, eprinte izigidigidi ezininzi ngobusuku. Nangona kunjalo, iingqekembe ze-meme njengengqekembe yeMidlalo yeSquid, ekhuphe abatyali-mali kwizigidi zeedola, ibonise iingozi ezibonakalayo ezibandakanyekayo kutyalo-mali kwiimali zeememe.
Amanqanaba angundoqo eSolana anokubukelwa — nge-26 kaNovemba
I-SOL igcine i-bias ehla ezantsi okoko ifikelele kwincopho yayo yeedola ezingama-260 ekuqaleni kwale nyanga. Oko kwathiwa, i-cryptocurrency yesihlanu ngobukhulu igqibe ukuhla ukuya kwi-multi-month enyukayo ye-trendline malunga ne-185 yeedola.
Le ntshukumo ye-bearish izinzileyo iza phakathi kokuthengiswa kwemarike ngokubanzi kulandela i-FUD eyenziwe ngokutsha ye-COVID-19. Ngelixa i-SOL ibonakala ichukumise ezantsi kolu tshintsho, umngcipheko wokuhla okuzinzileyo ukuya kwi-180 yeedola - i-axis ye-170 yeedola ihlala ingathinteli. Nangona kunjalo, i-bullish push ukuya kumjikelo weedola ezingama-200 kwiiyure ezizayo inokunqanda ukuhla ukuya kwi-axis yeedola ezili-180.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 200, i-$ 209, kunye ne-$ 216, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 182, i-$ 170 kunye ne-$ 160.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.43 zezigidi
Imali eyinkunzi yentengiso yase Solana: $ 57.2 billion
Solana ubukhosi: 2.35%
← Entsha izithuba1 2 abaDala izithuba →